Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Manampy ny ekipa mpanatanteraka azy ny Security Trail
SecurityTrails, ny Total Internet Inventory, dia manampy ny ekipany mpanatanteraka amin'ny alàlan'i Scott Donnelly ho filoha lefitry ny Sales sy i Taylor Dondich ho Lehiben'ny Teknolojika. Ireo mpikambana ao amin'ny ekipa maharitra Courtney Couch sy Kris Lopez dia mandray andraikitra vaovao hamongorana ny ekipa.
"Taylor sy Scott dia miditra amin'ny fotoana mety indrindra ho an'ny SecurityTrails. Miaraka amin'ny fanombohana ny vokatra Attack Surface Reduction, dia mandray fanamby lehibe kokoa ho an'ny fikambanana lehibe kokoa izahay. Ny fanandramana ataon'izy ireo dia hanampy amin'ny fiantohana ny fahombiazan'ny SecurityTrails sy ny mpanjifany. ” - Chris Ueland, CEO an'ny SecurityTrails.
Scott Donnelly dia mitondra fahalalana amin'ny sehatry ny indostria, rehefa nitazona ny anjara asan'ny mpitarika ambony amin'ny varotra na Expanse na Recorded Future. Nandritra ny fotoana naha filoha lefitry ny vahaolana ara-teknika tao amin'ny Recorded Future dia nitondra ny fampidirana ny sahan-kevitr'izy ireo fiarovana amina am-polony IT sy vokatra fiarovana i Scott. Ny fahatongavany tao amin'ny SecurityTrails dia hiantoka ny fahafantaran'ny mpanjifa ny sandan'ny Total Internet Inventory manerana ny fikambanan'izy ireo iray manontolo.
Taylor Dondich dia nandray ny toeran'ny Lehiben'ny Teknolojika vaovao. Ny mpiara-manorina Courtney Couch dia hifantoka amin'ny fikarohana fomba tsara kokoa hamantarana ireo fotodrafitrasa ho an'ny mpanjifa sy ny risika amin'ny anjara asany vaovao amin'ny maha Chief Chief of Innovation azy.
Dondich dia niasa tamin'ny sehatry ny haitao nandritra ny roapolo taona mahery niaraka tamin'ny orinasa toa an'i Yahoo sy Splunk, ary koa ny VP of Engineering ho an'ny MaxCDN. Ny zavatra niainany tamin'ny andraikitry ny mpanatanteraka teknolojia, mpanolotsaina ary injeniera dia hitarika ny SecurityTrails hampivelatra ny haitao vaovao ary hiantohana ny mpanjifa tsy ho jamban'ny loza tsy fantatra velively.
Efa niasa ho talen'ny fiaraha-miasa stratejika ao amin'ny SecurityTrails teo aloha, ny sehatry ny fandrosoana niandohan'i Kris Lopez niaraka tamin'ny fahaizany manokana momba ny fifandraisan'ny samy olona sy ny tetik'asa dia nahatonga azy ho safidy tonga lafatra ho Lehiben'ny mpiasa vaovao.
SecurityTrails dia mamoaka ireo fanovana lehibe ireo hanosika azy ireo amin'ny ambaratonga manaraka ary hahazoana antoka fa manohy manome ny kalitaon'ny data tsara indrindra mba hanampiana ireo orinasa hiaro tena.